Vakadzivirira zvizere vatorwa vanogona kushanyira Sydney kubva munaNovember 1
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Australia Kuputsa Nhau » Vakadzivirira zvizere vatorwa vanogona kushanyira Sydney kubva munaNovember 1
Australia Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
New South Wales (NSW) Mutungamiriri Dominic Perrottet
New South Wales Mutungamiriri akati yakwana nguva yekuvhura kuti ibatsire kumutsiridza hupfumi, uhwo hwakakanganiswa zvakanyanya nehurumende padyo nemwedzi mina kukiya COVID-19 kukiya.
Australia yakavhara miganhu yayo munaKurume 2020 mukupindura nyika yose COVID-19 denda.
MuNew South Wales, huwandu hwevanhu vakabaiwa jekiseni zvizere hwasvika pa77.8%, nepo 91.4% vakagamuchira kamwechete muyero wevharanda reCCVID-19.
Hupfumi hweNew South Wales hwakakuvara zvakaipisisa neyakavhara mwedzi mina COVID-19 kukiya.
New South Wales (NSW) Mutungamiriri Dominic Perrottet azivisa nhasi kuti Sydney ichavhurira vachengeti vekunze vakazara, vasina zvivakwa zvekuvharirwa, kutanga kubva munaNovember 1, 2021.
“Tinofanira kubatana nenyika. Hatigone kugara muno muhumeni humambo. Tinofanira kuvhura, ”mutungamiri wenyika yeAustralia ine vanhu vakawanda akadaro neChishanu.
Australia yakavhara miganhu yayo munaKurume 2020 mukupindura denda re COVID-19, ichibvumidza kupinda chete kune vagari nevagari vechigarire avo vanofanirwa kuitirwa kwavo kwega kwemavhiki maviri muhotera.
Mutungamiriri weAustralia, Scott Morrison akati mukutanga kwemwedzi uno nzendo dzekumhiri kwemakungwa dzaizodzoka kana makumi masere ezviuru zvevanhu mune imwe nyika vabaiwa jekiseni, asi zvaizowanikwa kune vekuAustralia uye zvaizoda kugara kwavo vega.
MuNew South Wales, huwandu hwevanhu vakabaiwa jekiseni rakazara hwatosvika 77.8%, nepo 91.4% vakagamuchira kamwechete muyero wejekiseni re COVID-19.
Nekudaro, NSW Premier yakati yakwana nguva yekuvhura kuti ibatsire kumutsiridza hupfumi, uhwo hwakakanganiswa zvakanyanya nehurumende padyo nemwedzi mina kukiya COVID-19 kukiya.
"Kudzivirirwa kwehotera, kugara kwega kumba chinhu chekare, tiri kuvhura nyika yeSydney neNew South Wales," akadaro Perrottet.
Sekureva kwaPerrottet, avo vanosvika mukati Sydney ndichatanga kuratidza humbowo hwekubaiwa nhomba uye kuongororwa kwakaipa kweCOVID-19 usati wakwira ndege kuenda kuAustralia.
Kubviswa kwezvinodikanwa zvega zvichabatsira kufamba kwenyika dzepasi rose kuenda kuAustralia uye zvingangotambirwa nemakumi ezviuru evaAustralia vakasiyiwa mhiri kwemakungwa nekuda kwemutemo. Pakavewo neyakaomarara quota pane huwandu hwenzvimbo dzinowanikwa kune vanodzoka vafambi muhotera yekuisa kwavo voga.
Panguva iyi, the Australia Medical Association, iyo inomiririra vanachiremba venyika, neChishanu yakayambira modelling yayo kuratidza kuti hutano hwenyika hauzokwanise kukunda kuwanda kwevarwere vecoronavirus nyika yavhurwa.